Wayne Rooney Childhood Story Plus Na-agbaghasị Ihe Ndị Na-akpata Ndụmọdụ
Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Wayne Rooney Childhood Story Plus Na-agbaghasị Ihe Ndị Na-akpata Ndụmọdụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; ''Wazza'. Anyị Wayne Rooney Childhood Akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Wayne, na Manchester United Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, Ndụ Ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-mara obere ihe ọmụma banyere ya.
Wayne Rooney Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Wayne Rooney dị ka nwa.
Wayne Mark Rooney AKA 'Wazza' amuru na October 24, 1985, nke Thomas Rooney (nna) na Mrs Jeanette Marie (Nne) na Croxteth Town, Liverpool, England.
Ndị mụrụ ya Mr na Mrs Rooney bụ ụmụ amaala Irish ndị kwagara Liverpool, England. Nke a site na itinye aka pụtara Wayne Rooney sitere na agbụrụ Irish. Wayne Mark Rooney bụ ọkpara nke ndị mụrụ ya.
John Stones Childhood Story Plus Ihe na-abụghị eziokwu
Wayne Rooney Ahụmahụ Childhoodmụaka.
Dika nwatakiri amuru na ulo ndi Katolik, Wayne Rooney ka omere ulo akwukwo isi nke Our Lady na St Smithin. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ gara De La Salle Humanities College.
Attga De La Salle Humanities College wepụtara ụzọ maka ọrụ ịgba bọọlụ ya. Nke a bụ ebe ịhụnanya ya na agụụ ya maka egwuregwu ahụ toro, ọ teghịkwa anya ruo mgbe Rooney hụrụ. O duziri ụmụnne ya nwoke ndị ọ tọrọ Graham na John ezigbo ihe nlereanya bụ ndị sokwa nzọụkwụ ya.
Rooney kewapụrụ site na football site na nwata. Omume ya na-adịgide adịgide maka football hụrụ ihe mbụ ya mere mgbe ndị isi ụlọ akwụkwọ jidere ya bọọlụ.
A kwụsịrị Wayne Rooney n'ụlọ akwụkwọ maka ụbọchị abụọ maka ịgba otu oghere na mgbidi nke ụlọ akwụkwọ sayensị. O were iwe maka na ejidere ya bọọlụ.
Mgbe a kwụsịtụrụ ya, enyere ya ohere ka ọ gafere n'egwuregwu bọọlụ ya, oge a ọ bụghị ịgba ya n'ụlọ nyocha sayensị, kama ọ bụ egwuregwu egwuregwu.
Wayne Rooney nne na nna na ụmụnne:
Wayne Rooney na papa m.
Wayne Rooney na-akọrọ a yiri ya na nna ya na-ekele ekele ha mara mma. Mr Thomas Rooney nọ nso nwa ọkpara ya (Wayne Mark Rooney) mgbe ọ na-etolite. O siri ike igbu nkekọ nna na nwa dị n'etiti ha.
Otu eziokwu mara banyere Mr Thomas Wayne Rooney (Snr) na-akọ banyere njide ya.
Danny Welbeck Nwata Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Akwukwo Igbo
Ọtụtụ afọ gara aga, ndị uwe ojii nwudoro Wayne Rooney nna ya na-enyocha aghụghọ ịgba bọọlụ.
Ndị ọrụ uwe ojii ahụ, bụ ndị gbabara n'ehihie n'ụlọ Wayne 450,000 nke Wayne Snr, nwụchiri nwanne nna Wayne Rooney, Richie.
Nnyocha ahụ na-acha na kaadị uhie e nyere Motherwell's Steve Jennings na egwuregwu megide Obi. Emechara hapụ ya ka emezuru ọnọdụ ịgbapụta ya.
Wayne Rooney na mama m.
Nne ya si Liverpool, Merseyside. Nne ya dị ka n'oge ederede na-arụ ọrụ dị ka nwanyị nri abalị n'ụlọ akwụkwọ nwa ya nwoke (Wayne Mark Rooney) gara otu mgbe.
Ọ bụ Tony na Colette McLoughlin mụrụ nne na-esote ndị Irish bụ ndị bụbu blọl na Ireland.
Jeanette Rooney Mgbanwe.
Site n'ụkpụrụ onye ọ bụla, ọ bụ mgbanwe kachasị mma. Nwanyị dị arọ sere foto osisi si n'oké osimiri na 2003 apụla.
A na-elekarị Wayne Rooney's Mum anya dị ka 'Nne nke Ndị Niile'. Ọ na-arụ ọrụ ịwa ahụ plastik ozugbo ịgbanwe ụdị ihu ya, ara, ogwe aka na ihu.
Taa, afọ a belatala nke na-enye ohere ka a ghara iri nri. Ọ dị mkpa ịmara na o mere ihe a niile n'aha ịga agbamakwụkwọ nwa ya nwoke £ 3million dị ka onye na-adịchaghị arọ.
Brothersmụnna nwoke a nwere obi ụtọ gara ụlọ akwụkwọ elementrị nke Lady anyị na St Smithin wee gbaa bọọlụ maka De La Salle Humanities College.
Wayne Rooney na Brothersmụnna nwoke Ndị Ntorobịa (Ahụmahụ Childhoodmụaka).
Taa, ụwa ha dị iche. Graham Rooney nọchiri anya nwanne ya nwoke nke okenye bụ Wayne Mark Rooney.
Ọ na-egwuri egwu maka East Villa na Liverpool Country Premier League n'oge edere. Lee ndị niile, ha toro.
Wayne Rooney (Aka nri) na Graham Rooney (Aka ekpe).
A machibidoro Graham Rooney iwu n'okporo ụzọ mgbe ọ kwagharịrị ugboro atọ karịa ịzụrụ mmanya maka otu oriri. Nke a gbasoro afọ abụọ ịkwọ ụgbọala na 2012.
Ahụhụ na-agụnye ịkwụ ụgwọ ruru $ 650 na awa 150 nke ọrụ obodo. Ndị uwe ojii kwuru na ya 'na-eme ihe ike' ma yie ya egwu na ha ga-akpọpụ ha maka ịda iwu na ụlọ nne na nna ya dị £ 450,000 na Liverpool.
John Richard Rooney bụ nwanne nwoke nke ọdụ nke Wayne. Dị nnọọ ka nwanne ya nwoke nke okenye 'Wayne', John nwere ọrụ mbụ ya na Everton. Ọ na-egwu Wrexham ugbu a dị ka ịga n'ihu (Dị ka n'oge ederede).
Coleen Mary McLoughlin - Nwunye Wayne Roone:
Wayne Rooney, zute nwunye ya bụ Coleen Mary McLoughlin mgbe ọ dị afọ 12 na mpaghara Liverpool nke dị na Croxteth. Na mbu, ha buru enyi. Ha malitere mmekọrịta mgbe ha dị afọ 16 mgbe ha gachara ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Wayne Rooney Alụmdi na Nwunye Foto.
Mmekọrịta ha siri ike karịa afọ niile n'ihi ụzọ nlekọta Wayne Rooney na ịhụnanya. E kpughere Wayne Rooney na agụụ ya maka ide abụ uri mgbe niile nye nwunye Coleen.
Mgbe ha mechara nke ọma na mkpakọrịta, ha abụọ kpebiri ịkọ eriri. Agbamakwụkwọ ha mere na Portofino, Italy na 12 June 2008.
Di na nwunye kwụrụ di na nwunye ahụ akwụkwọ akụkọ Britain kwụrụ £ 2.5! maka nanị ozi agbamakwụkwọ na foto.
Mgbe agbamakwụkwọ ha gasịrị, di na nwunye ahụ kwagara n'ụlọ obibi man 1.3m na Formby. Dị ka n'oge ederede, ha bi ugbu a na Prestbury, Cheshire, na £ 4 nde Neo-Georgian mega-mansion.
Dị ka n'oge ederede, a na-agọzi alụmdi na nwunye Wayne Rooney ugbu a na ụmụaka atọ mara mma.
Wayne Rooney na Ezinụlọ.
Na 2 November 2009, nwunye Rooney mụrụ nwa mbụ ha aha ya bụ Kai Wayne Rooney.
Na 21 May 2013, nwunye Rooney mụrụ nwa ya nwoke nke abụọ bụ Klay Anthony Rooney. Na 24 Jenụwarị 2016, Rooney mụrụ nwa nwoke nke atọ Kit Joseph Rooney. Isoro ndị ezinụlọ nọrịa bụ akụkụ dị nro na nlekọta karị nke ụwa Wayne.
Wayne Rooney Ntughari Ntutu:
Wayne Rooney Ntughari Ntughari.
Wayne Rooney nwere ihe ịma aka na-eto eto. Ọ gbanwere ntutu mgbe ọ dị afọ 25. Emere ntutu isi na ụlọ ọgwụ ọgwụ Harley n'okporo ámá London na 2013.
Wayne Rooney Biography - Ọrụ Nlekọta Ndị Ntorobịa:
Nrọ Rooney nke ịghọ bọlbụ kpakpando malitere n'oge ọ bụ nwata n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị mgbe ọ malitere igwu egwu dị ka nwa akwụkwọ.
Dị ka nwa akwụkwọ, o nwere ihe ndekọ nke ihe mgbaru ọsọ 72 n'otu oge, nke nwata akwụkwọ Liverpool ọzọ, Gerard mebiri na 2010.
Mgbe ọ dị afọ itoolu, Bob Pendleton hụrụ ya ma gwa ya ka ọ sonyere "Everton FC". Rooney sonyeere ndị ntorobịa nke Everton, bụ ndị o mere ka ọ bụrụ onye mbụ ọkachamara na 2002 n'oge 16.
N'ime afọ asaa nke sonyere ndị ntorobịa Everton, o mere ọkachamara ọkachamara ya na enyi na enyi wee merie ihe mgbaru ọsọ na 2002.
Rooney ghọrọ onye ama ama na 19th nke Ọktoba 2002 mgbe ọ ghọrọ onye na-eto eto na-eto eto na akụkọ ihe mere eme nke Premier League na 16 afọ na ụbọchị 360 mgbe ọ na-egwu maka Everton (ọ bụ ezie na ndekọ a karịrị ugboro abụọ).
Ihe mgbaru ọsọ ya megide ndị Arsenal na-agbaso mgbe ahụ bụ onye mmeri na-adịru oge ikpeazụ ma mee ka njedebe nke 30 nke egwuregwu London kwụsị.
Na 2006, Rooney rutere ihe dị ka $ 7 nde akwụkwọ si n'aka HarperCollins dee akwụkwọ akụkọ ya, Wayne Rooney: My Story So Far. Akwụkwọ ahụ tinyere Rooney na ntakịrị mmiri ọkụ ya na onye bụbu onye njikwa ya na Everton, David Moyes, onye gbara onye ọkpụkpọ egwuregwu ya ebubo maka nkwutọ.
Ha abụọ ruru ebe a na-akọwabeghị ikpe tupu ikpe ahụ ahụ n'ụlọ ikpe. Rooney edeela akwụkwọ abụọ ọzọ dịka akụkụ nke nkwekọrịta ya na HarperCollins.
Wayne Rooney Biography - ịkụ aka WWE Super:ar:
Wayne Rooney meriri Papa nke Afọ, na-etinye smackdown na WWE kpakpando n'ihu nwa ya nwoke n'ime Manchester Arena juru n'abalị ụnyaahụ.
Ikiri WWE Raw Yadịịị site na ringide n'akụkụ Kai dị afọ isii, ndị na-agba bọọlụ nọ n'okpuru usoro mmanya ndị otu mgba mgba Britụ Wade Barret ji. Iguzo n'akụkụ ya na onye otu ya na Seamus,
Wayne Rooney nwere obi ike iji tie onye mgba ahụ ọgụ ma na-ele ya ka ọ daa n'ala - nke, n'eziokwu, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ nke a na-ekwukarịghị karịa onye ọ bụla na-agba ọsọ Premier League ga-ada mgbe Wayne Rooney mara.
Eziokwu Wayne Rooney:
Dịka otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ ama ama n'ụwa niile, Rooney nwere nkwekọrịta nkwado dị ukwuu na Nike na EA Sports.
Coca-Cola kwusiri mmekọrịta ya na kpakpando Manchester nke na-ere ọkụ na 2011 mgbe ọ na-eme mkpesa maka ebubo ya na ndị akwụna na-etinye aka na iji akọ na-ekwu okwu rụrụ arụ n'oge egwuregwu telivishọn.
Nwunye ya Coleen Rooney enyela nleba anya na obibi obibi ha na ụmụ nwoke Kai na Klay na akwụkwọ ọhụrụ, Wayne Rooney: Nwoke Na-akpata Ihe Mgbaru Ọsọ.
Mikel Arteta hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Ezigbo Ihe Mere Ndụ Ndụ